Nhungamiro yevatariri kuBabget Friendly Dubai - Enda kuUAE!
Nhungamiro yevatariri kune Budget Friendly Dubai
Gems and Jewelry Industries in Dubai
Yakabudiswa na Dubai City Company at Dai 14, 2019
Chinongedzo chevashanyi kuBudget Friendly Dubai, Paunenge usipo iwe pane izvi Zuva rine zuva reDubai mu2020. Asi kuda kunzwa madhiri eguta usinga kuchera gomba muhomwe dzako, ipapo haufanirwe kupfura aya mabhajeti-ane hushamwari uye kamwe muhupenyu hwese chiitiko.
Dubai ine yakawanda uye yakawanda yekupa kunyangwe iwe wakakwira pachivande, kana chinongedzo chezvekudya, waini, kana vanoda mimhanzi nemhando, kana kungoda kutora vana vako kweimwe chiitiko chehupenyu nese kuchengetedzwa & utsanana. Ingoshuvira chimwe chinhu & iro guta rine iro kwauri!
Vatungamiri vangu gumi vanofanira kushanyira / zviitiko mazano ari pano:
Pano iwe unonzwa tsika yechinyakare yechiArab yekupemberera jecha regoridhe ... kune ngamera dzinofamba, dzinotasva bhiza muLand Cruiser mumatunhu ejecha, ruzivo mune chiArabhu maitiro Majlis ane mupenyu dumbu kutamba, maArmic henna tattoos, mufananidzo chikamu mune zvechiArabhu maateki ane zvishongo, kutamba kwemoto & tanoura kutamba kunoratidzwa. Zvimwe zvinopihwa zvinosanganisirawo nejecha kukwira (kana kuti unogona kuunza yako), quad bhasikoro etc.
Pfekai nguo dzakasununguka, chengetedza chiedza chechiedza chinosunungura
Pfeka shangu dzakasununguka
Bvisa bvudzi rako pamwe chete
Takura pamwe neSFF nepeji yakanaka
Takura mvura yakakwana yehombodo & zvokudya zvinonaka sezvinonzi buffet inotanga manheru.
KUBVA: Mitengo yematikiti yakasiyana kubva kuAED 70 nemunhu kuAED 250 kumunhu zvichienderana nekambani yefambi iwe unonyora purogiramu yako.
Tsvaga zvakawanda pamusoro Visa to Dubai.
2. Enda kunzvimbo yakakurumbira Burj Khalifa, Dubai fountain & the Dubai Mall
Funga nezveDubai & haugone kupotsa kufunga nezve idzi. Iyo yakareba akanakisa & yakakura kwazvo munyika.
Kana iwe uchityira kukwirira & kungoda kuramba uchiyemura runako rweinjiniya iyi inoshamisa. unogona kushanyira Dubai Mall & tarisa matsime & laser mwenje kuratidza paBurj Khalifa, nepo yemumhanzi chitubu show iri hafu yeawa, iyo laser mwenje kuratidza pane iyo refu tare ine hurongwa, tarisa yavo yemagariro mapeji pamberi uye uvape kuedza.
Bhuka matikiti ako mberi kana iwe uchida Burj Khalifa kushanya.
Shanya munguva dzemasikati emasikati kuitira kuti usarasikirwa nemwenje.
Pfeka shangu dzakagadzikana, pane sarudzo yekubatsira pawiricheya.
KUBVA: Kakawanda pasina
Kana uchinyatsoda kuziva zvinonzwa sei kunge uri pane pamusoro penyika, chaizvoizvo, saka usasuwa kutarisa Pamusoro weBurj Khalifa.
Pachipu inotanga kubva kuAED 150 kumunhu nepamusoro, webhusaiti yavo pachayo ine zvikwata zvakawanda zvepakombo.
Fungidzira a nzvimbo panowanikwa nhaka yenyika, nzvimbo yaunogona kushanyira inonyanya kutsvakwa zvivakwa uye zvivakwa zveimwe nyika dzinoverengeka, unogona kupupurira yavo yechinyakare chiitiko zviitiko, chikafu & hunyanzvi hwaunogona kuzvirumbidza pamusoro kumhuri yako neshamwari. Kushanyira pvillion dzenyika idzi iwe unosvika pakuziva zvakawandisa, zvekuti kunyangwe iwe uchizvikudza nekushanyira nyika idzi pachako, vanhu vangazvikurira.
Mune imomo, vane zviyeuchidzo, zvinonhuwira, zvipfeko zvetsika, zvokudya, midziyo uye zvisiri izvo. Endai izvi zvisingakanganwiki tsika mutsika kamwe mu Dubai.
Nzvimbo yacho yakakura uye inoda madiki emaawa e4.
Inotanga pa 4 PM kusvika 12 pakati peusiku zuva roga roga (October-April) uye rinoputika neawa rose rinopera uye migwagwa inotengesa, saka ronga saizvozvo.
Iwe unogona kutora rubatsiro rwevashuga kune vakwegura pamwe nekusununguka kupinda kune vakwegura.
Takura mvura yakakwana & sedzakadya (kana uine diki vana), kunyange iripo mukati zvakare
Kupfeka shangu dzakasununguka & kutakura shirts
COST: 15 AED pamunhu, vana vari pasi pe3 & vagari vakuru vanoenda vakasununguka
4. Tora Bedazzled paGood & Spice Souks, Al Seef Village, muRidha Dubai & DHOW
kushanya Bur Dubai uye Deira, iwe unowana manzwiro enguva dzekare & kunzwa kushoma kwemisika yeIndia Open kunyanya munharaunda Meenabazar. Pano iwe unowana akawanda akasiyana ezvinonhuwira mamwe iwe ausingawanzo kuwana se "Zatar". Goridhe inotengeswa mu Brazil mumwe wevakanaka kwazvo, kana uri muIndia, iwe unofanirwa kuziva kukosha kwakawanda kwesimbi iyi muhupenyu hwedu ... zvisinei, pano iwe uchaona zvirongwa zvausina kumbozviona.
Kushanyira mumadhora eAbara, zvinonakidza kufamba mukati meguta kutarisa nyika yekare uye itsva ye Dubai coexisting.
MuAl Viewf Village, nzvimbo dzekudyara dzakagadzirirwa semakamuri mu Old Arabic Village style & nzvimbo iyi yakangonaka chaizvo kushaikwa, ichayeuchidza mumwe weDhihi's Khau Gully ...
COST: Dhow cruise inotanga kubva paAED 70 mberi, zvichienderana neyo yamunosarudza. Iwe unogona kufamba mukati Abara Bhowa (AED 1 chete) kana kutora teksi yemvura (AED 20) kana kuti ngarava inotasva kubva kuMarina (AED 50). Maonero aya anoshamisa.
Hazvina zvakare zvekare chinoshamisa cheinjiniya & zviwi zvikuru zvakagadzirwa nevanhu. Idzi dzimba dzinovaka dzevamwe vevanhu vane mukurumbira wepasirese. Atlantis hotera ndeimwe yakaisvonaka hotera yekushanyira, kune paki yayo yemvura, makamuri akarasika nezvimwe.
Kuti uwane chimiro chakajeka chechimiro chechanza (AED 20 yeti yekudzoka tikiti pamunhu), bhodhi pane monorails, zvikasadaro unogona kukwira tekisi, kunyanya kana iwe uri boka rakakura revanhu & vasingade kushandisa yakawanda.
Mutengo: Unofanirwa kuvhara nguva
Ichi chi iyo yenyika mikuru & yakanaka kwazvo yemaruva gadheni, munhu haakwanise kufungidzira zvakawanda zvidyarwa zvakanyatsochengetwa mumoyo weinonzi yakaoma nyika, gore rega rega vane rakashongedzwa rakakosha & rakapetana theme senge rudo, kubhururuka, gore reMickey nezvimwe.
COST: AED 50per munhu, vana vanopfuura 12 makore 40 AED.
Rwendo rwako haruna kukwana pasina mufananidzo we Burj Al Arab mushure mekunge. Vane jecha rakawanda, jecha rakachena, shacks, kudya mimwe mitero kunze, kufamba nemakwikwi emakwikwi, zvakanaka mudzimba zvigadzirwa uye zvisiri izvo.
8. FUNGIDZIRA kuratidza paMutambo City Mall
Yayo yakakura kwazvo pasi rose, Guniess Book Record kukunda iyo laser pamvura inofungidzira. Iine 30 zvitubu uye kutenderera kwakanzwika kubatana nevateereri, IMAGINE kuratidzwa kwanga kusati kwamboonekwa. Iri HUGE!.
Kusununguka kwemari. Iyi kuratidzwa inotanga kuChmUMX PM panguva dzenguva imwechete kusvikira 6.30 PM
Zvakare zvakare, chimiro chikuru pane zvese pasi, nzvimbo yakagadzirwa zvakanaka. Shongwe imwe ye inoratidza zvakapfuura zveDubai uye imwe yacho ine chaicho chaicho iwe, nzvimbo ino yakanaka mukati mekunze. Inofanira kushanyira kamwe.
KUDA: AED 50 kuvanhu vakuru, kune dzimwe nzvimbo dzepamhuri, asi vana vari pasi peCNUMX vanoenda vakasununguka.
Ino inzvimbo inoshanyirwa zuva ranyura. nzvimbo yekushanyira pamwe chete nevana zvinoita kuti zvinyanye kunakidza. Izvi zvinosanganisira dinosaur par, inosimudzira paki & Ice park (ine tikiti rakaparadzana), asi inonakidza-yakazadzwa inofadza mune zvese.
Inotanga muna October uye inoramba yakasununguka kusvikira pakupera kwaMay, inodhura AED 65 (vana vari pasi peC3 kuenda vakasununguka).
Dubai City Company ikozvino kupa zvakanaka guides Mabasa muDubai. Boka redu rakafunga kuwedzera ruzivo rwemutauro wega wega wedu Dubai expats. Saka, uine izvi mupfungwa. ikozvino unogona kuwana vatungamiriri, matipi uye basa muUnited Arab Emirates nemutauro wako.